RASMI: Papiss Cisse oo ka tagay Premier League kuna biiray koox ka dhisan Shiinaha – Gool FM
RASMI: Papiss Cisse oo ka tagay Premier League kuna biiray koox ka dhisan Shiinaha
(Newcastle) 09 Luuliyo 2016 – Kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa ku dhawaaqday goordhow in weeraryahankeedii Papiss Cisse uu isaga tagay, isla markaana uu ku biiray kooxda horyaalka Shiinaha ka dheesha ee Shandong Luneng.
Tababare Rafael Benitez ayaa hadda ku jira dib u habaynta kooxda ku ciyaarta garoonka St James’ Park, waana taas midda keentay in 31-sano jirkaan loo ogolaado inuu lacag aan qiimeheeda la shaacin ugu dhaqaaqo horyaalka waddanka Shiinaha ee Chinese Super League.
Cisse ayaa kooxda Magpies lagu naanayso ku soo biiray bishii Janaayo sanadkii 2012-kii, intii lagu guda jiray waqtiga uu la joogay kooxda uu hadda ka tagay waxa uu u dhaliyey 37 gool 117 kulan oo uu u saftay Premier League.
Xiddigan xulka qaranka Senegal ayaan kaliya ahayn weeraryahanka la la xiriirnayey kooxdan Shandong Luneng, kaddib markii sidoo kale la wariyey in weeraryahanka Southampton ee Graziano Pelle uu ku dhow yahay inuu dhammaystiro heshiiska uu ugu biirayo kooxdan.
Mehdi Benatia oo maalmo uun u jira xirashada funaanada Juventus